महिलाबाट पनि पुरुषमाथि खतरा ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » शिक्षा/कला » समाचार » समाज » सूचना/प्रविधि » स्वास्थ्य अंक: 5735
महिलाबाट पनि पुरुषमाथि खतरा !
खोज केन्द्र बुधबार, मंसिर १७, २०७७ मा प्रकाशित
नेपालको कानुनले अहिलेसम्म महिलाले पुरुषलाई जबर्जस्ती करणी गर्नसक्ने परिकल्पना गरेको थिएन । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको नयाँ मुलुकी ऐन, लागू भएको झण्डै ५५ वर्ष चल्यो ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन भनेर २०७४ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लागू गरियो । संहिता बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ ।